कसरी लाग्छ शरीरमा क्यान्सर ? जानिराखाैँ - ज्ञानविज्ञान
शरीरमा चाहिने भन्दा बढी मासु पलाएमा क्यान्सर हुनसक्छ । क्यान्सर जुनसुकै कारणले पनि हुनसक्छ । कतिसम्म भने धुवाधुलो प्रदुषण लगायतको सुर्यको विकिरणले पनि क्यान्सर हुनसक्छ । त्यस्तै, शरीरको प्रतिरोधी क्षमताले यी कुरालाई कति पचाउन सक्छ, त्यसले पनि क्यान्सर रोगको निर्धारण गर्छ । तथापी, केही यस्ता कुराहरु छन्, जसलाई क्यान्सर हुनुको प्रमुख कारण मानिन्छ ।
क्यान्सर विभिन्न कारणले हुन्छ, जसका कारण शरीरमा क्यान्सर हुनसक्छ । जस्तै कि अक्सिजन । अक्सिजनको अभावमा हामी जिवित रहन सक्दैनौ । तर शरीरमा प|mी रेडिकल्सको रुपमा रहेको अक्सिजन पनि क्यान्सरको प्रमुख कारक हुनसक्छ ।
धेरैजसो मानिसमा ६५ वर्षको उमेर पछि क्यान्सर हुने गर्छ । यसको कारण के हो भने जति जति हाम्रो उमेर बढ्दै जान्छ, त्यति त्यति शरीरको स्वस्थ कोशिकाको पुन निर्माण हुने प्रकि्रया नष्ट हुनथाल्छ । जसले गर्दा शरीरमा क्यान्सर हुने सम्भावना उच्च हुन्छ ।
शारीरिक गतिविधिको कमी
अवस्थ खानपान, व्यायामको कमी तथा अनियन्त्रित तौका कारण पनि मानिसहरु विभिन्न किसिमका क्यान्सरको जोखिममा रहने गर्छन् ।
परिवारमा कसैलाई क्यान्सर छ भने त्यस्ता व्यक्तिबाट जन्मने बच्चालाई पनि क्यान्सर हुने सम्भावना उच्च हुन्छ । विशेषगरी, स्तन क्यान्सर, मेलानोमा, अण्डासयको क्यान्सर, प्रोस्टेट तथा आन्द्राको क्यान्सर पनि एक पिढीबाट अर्कोमा सजिलै सर्न सक्छ । यसको मतलव यो पनि हैन की यदी माता पितामध्य कसैलाई क्यान्सर लागेको छ भने तपाईलाई पनि क्यान्सर हुन्छ ।
कयौ पटक कुनै हर्मोनको असन्तुलन भएमा पनि क्यान्सर हुने गर्छ । विभिन्न शोधहरुले जनाए अनुसार आजकल महिलाहरु विभिन्न किसिमका हर्मोन थेरापीका क्रममा एस्ट्रोजेन नामक हर्मोन लिने गर्छन् जसले गर्दा उनीहरुमा क्यान्सरको जोखिम उच्च हुन्छ गर्छ । त्यस्तै, गर्भनिरोधक चक्कीको सेवन गर्नेहरुमा पनि क्यान्सरको जोखिम उच्च हुने विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानहरुले जनाएको छ ।
क्यान्सरका कारण मृत्यु हुनेमध्ये धुमपान तेस्रो नम्बरमा रहेको छ । धुमपान बाहेक सुर्तीजन्य पर्दाथलाई अन्य तरीकाले प्रयोग गर्नु पनि मुखको क्यान्सर सबैभन्दा ठूलो कारण मानिन्छ ।
जमीन तथा वातावरणमा रहेको कस्मिक किरण विकिरणले प्रमुख कारक मानिन्छ । रेडन ग्यास, रेडिएटिभ स्राव, एक्स रे परमाणु हतियारबाट निस्कने गर्छ । यस्ता विकिरणले कोशिकालाई हानी पुर्‍याउने गर्छ । र, क्यान्सरको जोखिम निम्त्याउँछ । न्युक्लियर पावर प्लाट वरिपरि वस्ने तथा त्यसमा काम गर्ने मानिसलाई पनि यस प्रकारको विकिरणले हानी गर्न सक्छ ।
प्रदुषण पनि क्यान्सरको मुख्य कारण हो । वायु प्रदुषणका कारण हामी प्रत्येक दिन कयौ तत्वको सम्पर्कमा आउने गछौ, जसले फोक्सोको क्यान्सरको समस्या निम्त्याउने गर्छ ।
मदिरा आफैमा क्यान्सरको एउटा ठूलो कारक हो । मदिराको साथमा धुमपानको सेवन गर्नेहरुमा क्यान्सरका साथै अन्य रोग लाग्ने सम्भावना अत्याधिक हुन्छ । मदिराकै कारण मुख, घाँटी, अन्ननली, भोकल कर्ड, कलेजो तथा स्तन क्यान्सरको जोखिम उच्च हुन्छ ।
भाइरस तथा व्याक्टेरिया
विभिन्न प्रकारका भाइरस तथा व्याक्टेरियाले पनि क्यान्सरको जोखिम उच्च पार्छ । जसमा ह्युम पापिलोमा भाइरस, एचआईभी तथा अन्य भाइरस तथा केही अन्य व्याक्टेरिया पर्दछन् ।
क्यान्सरको उपचारमा प्रयोग गरिने किमोथेरापीको प्रयोगले पनि क्यान्सर हुने खतरा उच्च हुन्छ । त्यस्तै, शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीको विकास गर्ने औषधीहरुको प्रयोगले पनि क्यान्सरको जोखिम बढाउने गर्छ । यस्ता औषधीको प्रयोग लिम्फोमा (ग्रन्थीको क्यान्सर) हुने सम्भावना उच्च हुन्छ ।
विभिन्न शोधहरुले जनाए अनुसार रेडमिड, प्रोसेस्ड मिट, नुन हालेर राखिएको मासु अत्याधिक सेवन गर्नेहरुमा पेट, आन्द्रा, पाठेघर ता प्रोस्टेट क्यान्सरको जोखिम उच्च हुन्छ ।
तल दिइएकाे सम्बन्धित जानकारी पनि पढ्नुहाेस्
मोटोपनबाट छुटकारा पाउन चाहनुहुन्छ ? यदि त्यसो हो भने यि कुराहरुलाई ध्यान दिनुहोस्
खाना नियमित खानुहोस्
१। आफुले खाने खानाहरुको बारेमा टिपोट बनाएर फुड जर्नल बनाउनुहोस ।
२। यदी तपाई आफ्नो तौल छिटो घटाउन चाहनुहुन्छ भने दिनको कम्तिमा पनि १ घण्टा सामान्य शारिरिक अभ्यास गर्नुहोस् ।
दैनिक गरिने शारिरिक अभ्यासले तपाईलाई फिट र स्लिम बनाउँछ । छिटो तौल घटाउन गरिने एक्सरसाइजहरु निम्न छन्
कार्डियो र स्टेन्थ ट्रेनिङ
कार्डियो एक्सरसाइजले तपाइलाई क्यालोरी जलाउन मद्धत गर्छ ।
दिनको एक घण्टा पसिना आउने गरि कार्डियो एक्सरसाइज गर्नाले तपाईलाई छिटो तौल घटाउन मद्धत पुग्छ ।
१। छिटो तौल घटाउन छ भने खानामा नुनको मात्रा कम, चिनी एकदमै कम र चिल्लो कम गरेर खाने ।
२। दुग्धजन्य पदार्थहरु कम खाने ।
३। ताजा फलफूल, अण्डाको सेतो भाग, सागसब्जीहरु, माछा र चिल्लो कम भएका खाना खाने ।
छिटो तौल घटाउने डाइट प्लान यसरी बनाउनुस्
१। फलफूल र सागसब्जीहरु पेटभरी खानुहोस
२। दैनिक ८ देखि १० गिलास सम्म पानी पिउनुहोस्
३। एकै चोटी धेरै खाना खानुको सट्टा दिनभरमा ५–६ पटक थोरै थोरै खाना खानुहोस
४। तारेको खानेकुराहरु, भात, आलु, ब्रेडहरु, पास्ता लगाएतका खानेकुराहरु कम खानुहोस्
५। आफुलाई व्यस्त राख्नुहोस यसो गर्दा तपाइलाई बोर लाग्दैन र खान मन लाग्दैन
तौल घटाउनलाई डाइटिङ गर्नु सामान्य भइसकेको छ । क्रयास डाइटमा थोरै खानामा पनि धेरै पोषण हुन्छ यो भोकै बस्नुभन्दा थोरै भिन्न छ र चाडो तौल घटाउन सहयोग गर्छ ।
तर, यो तरिकाले कहिलेकाँही उल्टो हानी गर्न पनि सक्छ किनभने तपाईले तौल घटाएपछि तपाइले डाइटिङ बन्द गरेपछि फेरी तौल बढ्न सक्छ ।
पेट वरिपरीको मासु घटाउँन यसो गर्नुहोस्
पेटको वरिपरिको बोसोले धेरैलाई तनाव दिएको छ । घटाउने मन हुँदा हुँदै पनि परिस्थिति र समय नमिलेर धेरैलाई समस्या परिरहेको छ । यो बोसो घटाउनका लागि यस्तो चिज जरुरी छ, जसले बढी भन्दा बढी क्यालोरी बर्न गरोस् ।
यदि तपाईं बजारमा पाइने कुनै पनि औषधी वा तौल घटाउने उत्पादनको प्रयोग गरेर पेटको बोसो घटाउँछु भन्ने सोच बनाउनु भएको छ भने यी कुराको सेवनले तपाईंको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पुर्याउन सक्छ । बजारमा पाइने धेरैजसो उत्पादनमा केमिकलको प्रयोग गरिएको हुन्छ जसले तपाईंको शरिरलाई फाइदाभन्दा बढि बेफाइदा पुर्याएको हुन्छ । यस्तोमा तपाईं बढिरहेको बोसोलाई घटाउनका लागि प्राकृतिक तरिका अपनाउनु लाभदायक हुन्छ ।
पेटको वरिपरिको बोसो घटाउने केही सजिला तरिकाहरु यसप्रकार छन् ।
कम फ्याट भएको खाना खाने र चिनीबाट टाढा बस्ने मानिसहरु अरुभन्दा बढि फिट हुन्छन् । एक चम्चा चिनीमा १६ क्यालोरी हुन्छ ।
यसले सजिलै मेटाबोलिज्मबाट शरीरले उर्जा प्राप्त गर्छ । त्यसैले चिनीको सन्तुलित प्रयोगले मोटोपना बढ्दैन । तर, चिनीबाट बनेका मिठाई, जस्तै जेरी, लड्डु, आदि अत्यधिक सेवनले मोटोपना बढाउँछ ।
अध्ययनहरुले पुष्टि गरेका छन् कि हरियो सागपातमा क्यालोरी कम हुन्छ । कम क्यालोरीले गर्दा यसको सेवनले मोटोपना बढ्दैन ।
हरियो सागमा भुरपुर फाइबर हुन्छ जसले गर्दा पाचन राम्रो हुन्छ । उदाहरणका लागि मुला, बन्दाकोभी आदि ।
तनावले हाम्रो शरीरमा धेरै प्रकारका समस्याहरु पैदा गर्छ । तनावका क्रममा निस्कने हार्मोन्सले शरीरको कर्टिसल लेभल बढाउँछ जसले गर्दा फ्याट जम्मा हुन्छ ।
कर्टिसल लेभल बढ्दा भोक पनि धेरै लाग्छ र पेटमा बोसो थुप्रिन्छ । त्यसैले हरेक दिन पर्याप्त निदाउनु र तनावमुक्त रहनु आवश्यक छ ।
यदि तपाईंसँग तौल घटाउनका लागि धेरै दिन छैन भने दालचीनीको उपाय तपाईंको लागि फाइदाजनक हुनेछ । बिहानको नास्ताभन्दा पहिले र सुत्नुभन्दा पहिले यसको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ।
एक कप पानीमा एक चम्चा दालचीनी पाउडर मिसाउनुहोस् । यो पेयलाई दैनिक दुई पटक पिउँदा केही दिनमा नै असर देखिनेछ ।
ओमेगा थ्रीले भरपुर खानेकुरा
Don't Miss it हाम्राे शरीरकाे धेरै रोग जिब्रो हेरेरै पत्ता लाग्छ, पढेपछि सेयर गर्नुहाेला
Up Next स्वस्थ र मजबुत दाँतको लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु यास्ता छन् जानिराखाैँ